Xiaomi Redmi 6A: kinova vaovao natomboka tany Sina | Androidsis
Androany 10 Jolay, ny Xiaomi Redmi 6A dia natomboka eny an-tsena any Shina, ilay telefaona vaovao ao anatin'ny faritra Redmi malaza. Tonga teny an-tsena ilay fitaovana tamin'ny kinova RAM 3 GB sy fitehirizana anatiny 32 GB, araka ny nambaran'ny marika tamin'ity faran'ny herinandro ity. Saingy, nahagaga ny maro, fa tsy nisy fampandrenesana mialoha, dia namidy kinova finday vaovao hafa izy ireo.
Amin'izany fomba izany, mpampiasa liana amin'ny Xiaomi Redmi 6A, izy ireo dia ho afaka misafidy ny kinova amin'ny fitaovana mety indrindra amin'izy ireo. Amin'izao fotoana izao, manomboka anio dia amidy any Shina izy ireo. Tsy fantatra ny fotoana hahatongavan'izy ireo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
Ny kinova vaovao an'ny Xiaomi Redmi 6A dia tsy mitovy amin'ny resaka RAM sy fitehirizana anatiny. Hatramin'ity tranga ity, ny telefaona dia miloka amin'ny RAM 4 GB sy tahiry anatiny 64 GB. Ka somary matanjaka kokoa izy io ary manome toerana bebe kokoa noho ilay kinova hafa an'ny fitaovana sonia.
Nahagaga izany satria ny maodely teo aloha teo amin'ny faritra dia navoaka tamin'ny kinova misy RAM 3 GB sy tahiry anatiny 32 GB. Amin'izay mba maneho ny fanovana paikady ho an'i Xiaomi. Saingy na eo aza izany dia mitazona hatrany ny vidiny ambany.
Ity kinova vaovao an'ny Xiaomi Redmi 6A ity dia natomboka tany Sina tamin'ny a vidin'ny 999 yuan, izay amin'ny tahan'ny fifanakalozana dia 129 euro. Ka maodely mora vidy tokoa amin'ny resaka vidiny. Saingy tsy tokony hahagaga izany raha jerena fa tonga any amin'ny faritra Redmi, fantatra amin'ny vidiny ambany.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatra na hahatratra ny tsena iraisam-pirenena ity kinovan'ny telefaona ity. Ny fahitana ny fanitarana ny Xiaomi any Espana dia azo inoana fa halefa. Na dia mbola tsy manana vaovao hatreto aza izahay. Noho izany, tsy maintsy miandry ny marika ihany isika raha mila vaovao bebe kokoa momba ny Xiaomi Redmi 6A.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia mandefa kinova vaovao an'ny Xiaomi Redmi 6A
Piozila mahandro miaraka amin'i Push Sushi sy ireo fomba fahandro mahafinaritra azy